Ohoo Ahaaa! – Rasaasa News
“Ciyoow Caawa Fiidkii Aan Ciyaare Caano Noo Keen.” Seedi oo dhangalaas dhagta muudsaday Abti-doon iyo Abtidoon oo Oohin Irida kala baxay.
Shir ay lahayd kooxda Jwxo-shiil, oo maalintii Sabtida ahayd July 8, 2011 ka dhacay Mineapolis ayey gacanqaadyo xun xun iyo aflagaado is waydaarsadeen masuuliyiinta ugu saraysa kooxda Jwxo-shiil, arintaas oo keentay in shirkii lagu kala dareero.
Shirka waxaa ka qayb galay Cabdiraxmaan Maadeey [abtidoon] oo ayaamahanba joogay Maraykanka iyo Maxamed Macalin [seedi], oo ah Jwxo-shiil, seedigiis oo ka yimid Canada.
Kooxda oo beeno u kala safrisay Waqooyiga Maraykanka iyo Australia, in badana ka gabanayey taageerayaashooda ayaa hoolal ku qabanayey shirar madluunsan labadii todobaad ee ugu dambeeyey.
Sida aanu warka ku helay, kooxdii shirka ku qabanaysay Mineapolis, ayaa kolkii ay dhamaadeen hadaladii aan meherada lahayn ee ay u sheegayeen taageerayaasha madluunsan ayey fasaxeen in taageerayaashu su,aalo waydiiyaan.
Waxaa halkaas labo su,aalood lagu waydiiyey Abti-doon, kuaaws oo ahaa maxaa ka jira wararka soo noq noqonaya ee sheegaya in masuuliyiinta kooxdu ay ku baayac mushtaraan qaaraanka nalaga qaado, su,aasha kale ayaa ahayd ma dhabaa in Cabdikariin Sheekh muuse uu bixiyey sirta labada wariye ee la qabtay?
Abti-doon oo ay is ag fadhiyeen Seedi, ayaa ku jawaabay arimaha qaarna wax way ka jiraan qaarana waxba kama jiraan. Seedi ayaa aad uga cadhooday Jawaabta Abti-doon, wuxuuna hoos ugu yidhi adiga iyo Cabdikariin Muuse isku dameer baad saaran tihiin, waxaa qoslay qaar taageerayaasha ka mid ah oo fadhiyey kuraas ku dhaw.
Abti-doon oo isna cadhooday ayaa yidhi AAMUS, Seedi ma sugine dhangalaaso ayuu dhaban fujiyey iyo wuxuu isku raaciyey waa lagula socday in aad DABA-QOODHIGAAD tahay.
Talo fara ka baxday buuq, sawaxan iyo caraatan kooxda dhaxdeedii ah ayaa hoolkii ka bilowday. Abti-doon oo ah nin saaxibu BUUFIS ah ayaa ILMO dhabanadiisa qoysay, kolkaas ayaa SEEDI hoolkii maslaxad laga saaray.
Dad goob joog ahaa waxay sheegeen in Abti-doon, uu ku qaylinayey waligana ma been baanu dadka u sheegi, wax ay ogg yihiin baanu waligana ka qarinaa.
Taageerayaashii Daboqodhiga ahaa ayuu han-jab ku dhacay, ayaa ku guruusay kolkii horeba waanu ogayn in ayna wax hore u wadaynin khaa,imiin Ilaahay colkiisa ah.
Waxaa jiraa dhawr telefoon oo ay qaaxo iyo Jwxo-shiil, damceen in ay kula xidhiidhaan Abti-doon wuuse diiday in uu ka qabto.
Seedi oo isagu ah nin ku baar daaqa Jwxo-shiil, ayaa lagu yidhi khalad baad samayseen.
Waxaynu u joogi doonaa meesha ay ka cago taagto.
Madaxweynaha Dawlada Degaanka Somalida oo ka Qayb galay Xaflad Qalin Jabin ah